Guddi Wasiiro iyo Xildhibaano ka soo jeeda Beelaha Hawiye oo u ambabaxay Baydhabo - Jowhar Somali Leader
Home News Guddi Wasiiro iyo Xildhibaano ka soo jeeda Beelaha Hawiye oo u ambabaxay...
Guddi Wasiiro iyo Xildhibaano ka soo jeeda Beelaha Hawiye oo u ambabaxay Baydhabo
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya, ayna xubno ka yihiin Wasiir kuxigeenka Dekedaha Cusmaan Daallo, Xildhibaano iyo Senataro ka soo jeeda Beelaha Hawiye ayaa maanta u ambabaxay magaalada Baydhabo.
Wafdigan ayaa ah Guddi ka kooban 13 xubnood oo habeen hore la magacaabay, kaddib markii ay shir isugu yimaadeen Wasiirada iyo Xildhibaannada ka soo jeeda Beelaha Hawiye ee cabashada ka keenay saamiga laga siiyay kuraasta Xildhibaannada Baarlamaanka Koofur Galbeed.
Guddigan ayaa la filayaa inay magaalada Baydhabo kula kulmaan Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen, iyagoo gaarsiin doona tabashada ay ka qabaan kuraasta Beelaha Hawiye laga siiyay Xildhibaannada oo ah 9 xubnood.
Kulankii habeen hore ka dhacay Hotelka Maa’ida ayaa waxaa lagu gorfeeyay sidii qadiyadaha beesha loo xoojin lahaa, isla markaana kulamada soo socda ay u noqon lahaayeen mid joogto ah oo ay beeshu iska war-sato xaaladaha guud ee dalka ka jira, si isku duubni ku jirta loogu wajaho tabashooyinka gaarka ah ee beesha dhexdeeda ah.
Meydka Marxuum Maxamed Cabdi Xaashi oo lagu aasay magaalada Garowe